अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी)को टी–२० बरियताको उत्कृष्ट एकसय खेलाडीभित्र नेपालका चार खेलाडी परेका छन् । आइसिसीले आज सार्वजनिक गरेको टी–२० वरीयतामा नेपालका दुई ब्याटसम्यान र दुई बलर परेका हुन् । ब्याट्सम्यानको वरीयतामा २६५ रेटिङ अंकका साथ कप्तान पारस खड्का ९० औँ र २३८ रेटिङ अंकका साथ शरद भेषवाकर ९८औँ स्थानमा परेका...
काठमाडौँ, २२ साउन : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश पदका लागि सिफारिश व्यक्ति अस्वीकृत भएको घटनालाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि कार्यकारिणीको अतिक्रमण भएको आरोप लगाएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आज बसेको काँग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले उक्त घटनालाई...
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) ले केन्द्रीय कार्य समितिको वैठक आह्वान गरेको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पहिलो पटक बस्न लागेको केन्द्रीय समितिको वैठकमा निर्वाचन समीक्षा, संगठन विस्तार, वैचारिक तथा राजनीतिक कार्यदिशाका विषय प्रखर रुपमा छलफल गरिने केन्द्रीय सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । वैशाख २५, २६ र २७ गते...
काठमाडौं । राप्रपाधारी पार्टीहरुलाई एकीकृत गर्ने प्रयास जारी छ । तीन पार्टीमा विभाजित कुनै पनि राप्रपा गत निर्वाचनमा राष्ट्रिय पार्टी बन्न असफल भएपछि पार्टीपंक्तिमा चरम चिन्ता र चासो छाएको हो । यसै क्रममा पुस्ता हस्तान्तरण सहितको नयाँ राप्रपा एकीकरणको प्रस्तावना राप्रपा वृत्तमा सघन रुपमा छलफल भइरहेको छ । पुरानो पुस्तालाई अभिवावकको...
काठमाडौँ- केन्द्रीय मन्त्रीमण्डल २२ सदस्यीय बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दै ११ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री थपेसँगै उक्त संख्या पुगेको हो । शुक्रबार साँझ नवनियुक्त मन्त्रीहरुले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा पद तथा गोपनीयताको सपथ लिए। एमालेबाट परराष्ट्रमा पार्टी सचिव प्रदीप ज्ञवाली, अर्का सचिव गोकर्ण...
काठमाडौं । पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शाहीद खाकान अब्बासी अकस्मात नेपाल भ्रमणमा आउने तयारी गरेका छन् । उनी नवनियुक्त प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलाई बधाई दिन आउने औपचारिक जानकार दिए पनि उनको आगमनको मुख्य कारण अर्कै रहेको बताइएको छ । सार्कको पुनर्गठनको प्रस्ताव लिएर नेपाल उनी आउन लागेको बुझिएको छ । अघिल्लो बर्ष नै नियमित रुपमा सम्मेलन...
काठमाडौं । एकल संक्रमणीय व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुने भएपछि काँग्रेसले ७ प्रदेशबाट छनौट हुने कुल ५६ सिटमध्ये ११ सिट प्राप्त गर्ने निश्चित देखिएको छ । एमाले—माओवादीले ३७ सिट र राजपा—फोरमले ५ सिट प्राप्त गर्ने निश्चित हुँदा बाँकी ३ सिट कसले प्राप्त गर्ने भन्ने निर्धारण साना दलहरुको अंकगणितले निर्धारण गर्ने भएको छ...
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रियसभा सम्बन्धी अध्यादेश प्रमाणीकरण गरेकी छिन् । एमालेको हिजोके बैठकले अध्यादेशमा लचक बन्ने निर्णय एमाले नेता सुवास नेम्वाङले सुनाएलगत्तै आज यो अध्यादेशमार्फत आएको विधेयक पारित गरिएको हो । योसँगै राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य भएको छ । अब एकल संक्रमणीय विधिअनुसार प्रदेशसभाले र...
काठमाडौं । संघीयतालाई संवैधानिक रुपमा संस्थागत गर्दै बनेको संविधानअनुसार पहिलोपटक भएको निर्वाचनमा १३ ओटा दलले आफ्नो अस्तित्व जोगाएका छन् । तीमध्ये ५ ओटा दलले आफूलाई राष्ट्रिय पार्टीको दर्जा पाउने सम्भावना छ । शुक्रबार निर्वाचन अायोगले सार्वननिक गरेको प्रदेश समानुपातिक मतपरिणामअनुसार उक्त नतिजा देखिएको हाे । नेकपा एमाले, नेपाली...
काठमाडौं । नेकपा एमालेले २ नं प्रदेशमा सरकार बनाउने कुरा मिले माओवादीसँगको सहकार्य तोड्ने तयारी गरेको छ । बाम गठबन्धनमा जोडिएका दुई पार्टीहरु नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच पार्टी नेतृत्वको विषयमा कुरा नमिल्दा २ नं प्रदेशमा सरकार गठनको कुरा मिले माओवादीसँगको सहकार्य नै तोड्ने पक्षमा एमाले लागेको एमाले निकट स्रोतले जानकारी...
एमालेको ४१ हजार भोटले संसद्मा १ सिट, यसरी तय गरिन्छ सिट संख्या (विधि सहित)
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको मत गणना सकिएको छ । निर्वाचन आयोगले शनिबार अपराह्न एक विज्ञप्ती जारी गर्दै मत गणना सम्पन्न भएको जानकारी दिएको हो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत अब दुई जिल्ला सुनसरी र सर्लाहीका केही निर्वाचन क्षेत्रमा गणना जारी रहेको जनाएको हो । सुनसरीको क्षेत्र नं १ तथा...
भीमार्जुन आचार्य भन्छन् 'म एकल संक्रमणकालीन व्यवस्थाको पक्षपाती हुँ'
काठमाडौं । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले आफू एकल संक्रमणीय व्यवस्थाको पक्षपाती रहेको बताएका छन् । शुक्रबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै आचार्यले अहिलेको धरातलीय आवश्यकत्ता नै एकल संक्रमणीय व्यवस्था रहेको भन्दै यसमा कुनै पनि मत खेर नजाने धारणा व्यक्त गरे । उनले राष्ट्रिय सभा नभएपनि सरकार गठन हुन सक्ने विश्वास दिलाएका...
देउवाका 'सहयोगी'हरु, जसले जानाजान पार्टी र सभापतिलाई भड्खालोमा हाले
काठमाडौं । केही समय अघि काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले युवानेता गगन थापालाई पार्टी प्रवक्ता बनाउनको लागि पत्र नै तयार पारेका थिए । त्यतिबेला केही सञ्चारमाध्यमले समाचार पनि बनाएर हाले । तर, त्यो समाचार आएको झण्डै दुई महिना वित्न लागिसक्यो न त गगनले पार्टी प्रवक्ताको पत्र बुझे न त अरु कसैले नै । त्यो पत्र त्यसै कुन् रद्दीको टोकरीमा...
बाम गठबन्धनको एजेण्डा बोक्दा विवादमा राष्ट्रपति, बारले दियो चेतावनी
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा गठनको विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमप्रति कानून व्यवासायीहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । राष्ट्रपतिले एकल संक्रमणीय व्यवस्था सहितको राष्ट्रिय सभा सञ्चालन सम्बन्धी अध्यादेशलाई फिर्ता बोलाउने कदम विरुद्ध कानून व्यवसायीहरु विरोधमा उत्रिएका हुन् । राष्ट्रिय विषयमा सधैं चर्चामा आईरहने कानून...
कोषलाई ७ खर्बको बनाउन कर्मचारी सञ्चय कोषको यस्तो अफर, अब व्यक्ति–व्यक्तिले पनि पैसा जम्मा गर्न सक्ने
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चयकोषले व्यक्तिगत रुपमा समेत रकम जम्मा गर्न दिने सुविधा ल्याउन लागेको छ । रकम जम्मा गर्नेको सङ्ख्या बढाउने लक्ष्यका साथ व्यक्तिगत रुपमा समेत रकम जम्मा गर्न पाउने योजना सञ्चयकोषले अगाडि सारेको हो । कोष सञ्चालक समितिमा त्यससम्बन्धी प्रस्ताव पेश भइसकेको छ । कोषका निमित्त प्रशासक दीपक रौनियारले सञ्चालक समितिको...